Sida loo dar ID3 Tags in Your Music Collection
> Resource > Download > Sida loo dar ID3 Tags in MP3 Faylal ay si sahlan
Haddii aad tahay taageere weyn oo muusiko ah digital, waxaa laga yaabaa inaadan aqoon macluumaad ah ee files MP3 ah, sida magaca track, artist, sii daayo sano iyo xataa tahay album noqon. Noocan ah macluumaadka waxaa ka mid ahaa in dhammaan tag ID3 ah, taas oo ah nooc ka mid ah metadata loo isticmaalo in lagu qeexo file MP3, oo waxaa had iyo jeer gundhig ugu yahay faylka. Laakiin nasiib darro, isku aaddanayn ama maqan tags laga yaabaa in wax caadi ah in aad ururinta music weyn. Markaas sida loo dhan ku MP3 files ID3 tags si fudud ku dari? Halkan waa xal inay idinka caawiyaan. The Wondershare TidyMyMusic u Mac ( TidyMyMusic Wondershare ) si toos ah ka heli ID3 tags in Dufcaddii u maktabadda music dhan aad. Waa maxay dheeraad ah, waxa ay sidoo kale ku siinayaa awood u leh inay tags ID3 ka xaalkaa keligaa. Waxaa Download si loo soo dajiyo aad Mac ka dibna hubi hagaha socda tallaabo-tallaabo.
1 in TidyMyMusic dejinta maktabadda music aad
Marka aad furto barnaamijka dib markii la rakibey, waa iskaan doonaa maktabadda Lugood aad iyo aad u hesho dhammaan music ee. Iyo barnaamijka samayn doonaa iskaanka iyo soo degida mar kasta oo aad dib-u-furan.
Fiiro gaar ah: Waxaa laga yaabaa inaad music in aan la maareynin by Lugood. Tag Music nidaam iyo jiidi folder music si ay saxaarad file ama guji badhanka File Open ku darto music ee.
2 Raadi ID3 tag, waayo, MP3 faylasha
Tag qayb ka madax suuqa kala barnaamijka ee. Sax Search for Songs Allaha oo guji badhanka Scan. Markaas barnaamijkan bilaabi doonaan in ay ka heli ID3 tag, waayo, music oo dhan.
Haddii aad leedahay maktabad music weyn, waxaanu kuu soo jeedinaynaa in aad isticmaasho function iskaanka inta aad weli dooran kartaa hal song oo guji badhanka Aqoonso on xaq hoose si aad u hesho tag ID3 ay.
3 ID3 tags in ay heesaha oo dar
Markii barnaamijka la dhammeeyo habka baadhi ah, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah hees iyo is barbar tag ID3 ay khaanadda saxda ah. Haddii macluumaad cusub ee laga helay ay tahay waxa aad u baahan tahay, waxaad riixi kartaa batoonka Codso hoose si Cudarada tag ID3 in ay file MP3 ah. Waxa ay noqon doontaa si dhaqso ah haddii aad xulan dhowr heeso iyo codsan waqti isku mid ah.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad wax ka bedel tag ID3 adigu by, waa ay fududahay. Dooro mid ka mid song oo guji icon Edit ku khaanadda saxda ah. Markaas dhammaan macluumaadka ku jira khaanadda saxda ah bedeli doono inuu yahay editable. Beddel tahay heestii by jiidayeen image ah in meesha album tahay iyo nooca ay hadalkiisa kasta si ay u buuxiyaan oo duurka ku tafatir ah macluumaad kale oo ku.
Mar dambe ma ka waaban. Waa inaad siisaa barnaamijkan go a iyo madax ee waayo-aragnimo ah music cajiib ah.
Halkan waa tutorial video si loo hubiyo ah: